Chelsea Oo Rafcaan Ka Qaadatay Casaankii Matic
HomeWararka MaantaChelsea Oo Rafcaan Ka Qaadatay Casaankii Matic
Laacibka khadka dhexe ee saamaynta badan ku leh khadka dhexe ee Chelsea, Matic ayaa waajahaya ganaax saddex ciyaarood uu kaga maqnaan doono garoomada kadib markii casaan toos ah la siiyey kulankii Burnley, balse kooxdiisa ayaa manta xaqiijisay in ay rafcaan ka qaadatay casaanka ganaaxa sababaya ee la siiyey halbowlahooda khadka dhexe.
Sabtidii ayaa casaan toos ah la siiyey Memanja Matic kulankii Burley ee ka dhacay Stamford Bridge ee ku dhamaaday 1-1, markaas oo laacibkan uu kala tuuray Ashley Barnes isla markaana dirqi lagaga qabqabtay, isaga oo ka xanaaqsanaa khalad uu ka galay ninka uu gacanta ula tegay.
Matic ayaa waajahaya ganaax saddex ciyaarood ah, taas oo haddii ay Chelsea ku guul darraysatay in rafcaankeeda laga aqbalo uu seegi doono kulanka League Cup ee faynalka ah ee Tottenham ee qorshaysan Axadda iyo labada kulan ee kale muhiimka ah ee West Ham United iyo Southampton.
Xidhiidhka Ingiriiska ee FA ayaa u ballansan in uu go’aan ka gaadho rafcaanka Chelsea duhurnimada Salaasada, laakiin sida uu Mourinho shaaciyey Sabtidii markii ay ciyaartaasi dhamaaday ma filayaan in ay ku guuleystaan rafcaankaas.
“Mniyaad waligaa aragtay Chelsea oo ku guuleysatay rafcaan” sidaa waxa ku jawaabay Mourinho oo uu saxafi ku sugnaa shirkii jaraa’id ee ciyaartii Sabtidii kadib uu qabtay Mourinho ku weydiiyey in uu rafcaan qaadan doono iyo in kale.
Celtic vs Bayern Munich 1-2 All Goals & Highlights – Champions League
Ma dhabaa in Mourinho dib ugu noqonayo Bernabeu?
Murashaxiinta Abaalmarinta BBC ee cayaaryahanka Africa 2014 Oo La Soo Saaray